रवि लामिछाने घ टनामा ताते प्रेम बानियाँ पनि: आ त्मह८त्या गरेको मान्छेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो भन्दै जंगिए ? « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १३:३७
काठमाडौँ, ३१ साउन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनिको घट नामा रवि लामिछाने लगायत तीन जना प क्राउ परेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । सामाजिक सञ्जाल भरी रवि लामिछानेको घटखनालाई लिएर तर्क वितर्क भइरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा उत्रिएकाहरुले समाजिक सञ्जाल रंगाएका छन् । यसै क्रमामा आफ्ना सहकर्मीलाई परेको घखटनामा पत्रकार प्रेम बाँनियाले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । आफुलाई रवि लामिछाने सहित ३ जनाले यस्तो गर्न बाध्य पारेको भन्दै बोलेको पुडाशैनीको भिडियोका बारेमा बाँनियाले धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
रवि लामिछाने प८क्राउ परेपछी प्रेम बानियाँले यसो भनेका छन् रबिजी रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा प्रचलित कानुनको सम्मान गर्दै ‘ नम्बर १, आत्मह८त्या गरेको मान्छेको पकेट भित्रको मोबाइलमा रहेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ?
उसलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन रु यो त अनुसन्धानको विषय थियो र प्रहरी अधिकारी बाहेक अरु कसैले यो सार्वजनिक गर्नै सक्दैनरमिल्दैन ! यदि अपराध पुष्टि भयो भने मात्रै प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन किन भुलियो ? कुल २३ मिनेटको भनिएको भिडियोमा खोई बाँकी भिडियो ? अरु पनि त आरोपित हुनसक्छन् ? नम्बर २, भोलि, कोही कसैले कथम्कदाचित, प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका नाममा तिम्रा कारण मैले आत्मह८त्या गरेको हूँ भनेर पासो लगायो भने उहाँहरु जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?
नम्बर ३, जनहित सम्वन्धि कार्यक्रम प्रशारणको अन्तिम तयारीमा रहेकावेला एउटा पत्रकारलाई कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिई केवल डेढ घण्टाअगाडि टेलिभिजन स्टेशनबाटै पक्राउ गर्दा के त्यो न्यायिक हुन्छ रु जबकि उसले सार्वजनिक रुपमा भनिसकेको छ ‘यदि म दोषि ठहरिए कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार छु।’ भोलि फेरि कसैलाई यस्तै पर्यो भने ‘ ? नम्बर ४, नेपाली पत्रकारितामा यो ‘ग्याङ्फाइट’को इतिहासले नेपाली समाजलाई अति तल गिराएको छ, यसमा हाबि अतिवाद् रबिजी बिरोधी र समर्थकले समाज को रंग कुरुप देखिएको छ ।